1st ODI - Rain takes centrestage | Photo Gallery
1st ODI - Rain takes centrestage
November 20, 2006 12:45
A young boy looks on as the rain delays the start of the 1st match one-day series India v South Africa in Johannesburg, South Africa, Sunday, Nov. 19, 2006. The first one-day international match was officially called off, because of persistent rain.
Rain delays the start of the 1st match one-day series against South Africa's in Johannesburg, South Africa, Sunday. The first one-day international match between South Africa and India was officially called off, because of persistent rain.
Rain delays the start of the 1st match one-day series India against South Africa in Johannesburg, South Africa, Sunday. The first one-day international match between South Africa and India was officially called off, because of persistent rain.
Cricket ground workers pull over the rain cover as the rain delays the start of the 1st match one-day series against South Africa's in Johannesburg, South Africa, Sunday, Nov. 19, 2006. The first one-day international match between South Africa and India was officially called off, because of persistent rain.
Cricket umpire Brian Jerling, inspects the ground as the rain delays the start of the 1st match one-day series between India and South Africa's in Johannesburg, South Africa, Sunday, Nov. 19, 2006. The first one-day international match was officially called off, because of persistent rain.